यस्तो छ मैले देखेको जापान | Citizen Post News
यस्तो छ मैले देखेको जापान
२०७४ कार्त्तिक २१ गते १०:२५
टोकियो । हामी नेपालको राजनीतिले वाक्कदिक्क भएर नै विदेशी भूमिमा पलायन हून वाध्य भएका हौं । हामीले विदेशमा आएर केही सिक्ने की विदेशमा पनि उही फोहोरी राजनीति नै गर्ने हो ? विचारणीय छ । तर यहाँ बिदेशी भूमीमा पनि गुण्डागर्दीको फोहोरी राजनीतिनै गर्ने हो भने त विदेशमा भन्दा नेपालमै नेपालीका लागि हरेक हिसावले राम्रो स्कोप म देख्छु । त्यसैले, म भन्छु विदेशी भूमीमा फोहोरी राजनीति छोडौँ । आफूले सिकेको ज्ञानलाई आफ्नो देशमा उपयोग गरौँ । जसले गर्दा हाम्रो भावी पूस्ताले हाम्रै पालामा विकासको अनुभूति गर्न सकोस् ।
यस्तो छ मैले देखेको जापान:
मैले देखेको बिभिन्न कूरामध्ये एउटा सानो अंश नेपालसँग तुलना गर्ने कोसिस गरेको छु । त्यो पनि भूकम्पलाई केन्द्रित गरेर मैले तुलना गर्ने कोशिस गरेको छु । यहाँ समय र मान्छे एकै साथ दौडिन्छन् । मैले देखेको, भोगेको जापान अनि नेपालबीच धेरै नै फरक छ ।
१. नेपालमा भूईचालो आँउदा ठूलो ठूलो स्वरले कराउनू पर्छ । जतिसक्दो चाँडो घर बाहिर भाग्नुपर्छ । तर जापानमा धेरै कराउनु हुंदैन् । जसले गर्दा अरूलाई कुनै काम वा अन्य कुरामा असर नपरोस् । भूईचालो जाने बेलामा दौड्ने, भाग्ने नभई घरभित्रै बस्नुपर्छ ।
२. नेपालमा हामी घरबाहिर खुल्ला ठाँउमा सुरक्षित महसूस गर्छौ । हामी रातदिन नसुतिकन हल्ला गरेर खूल्ला चौरमा बस्छौं । तरजापानमा हामी घरभित्रै बस्छौं । घरभित्र भन्दा बाहिर असुरक्षित महसुस गछौं । घरमै ढुक्कसँग बस्न, सुत्न नै आनन्द अनुभव हुन्छ ।
३. नेपालमा भूकम्प कति रेक्टरको गयो भनेर भूगर्भ बिभागबाट सार्वजनिक हून बाँकी भन्छन् । कसैले त म निन्द्रामा थिए, थाहै भएन भन्छन् । तर जापानमा भूकम्प जानु भन्दा २ सेकेन्ड अगाडि नै सबै जनाको मोबाइलमा आकस्मिक अर्लट घण्टी बच्छ । जुन अलर्टबाट सुतेका मान्छेहरू समेत उठ्छन् । जसका कारण मानिसहरूले सुरक्षित उपायहरू अपनाउन सक्छन् । यहाँ भूकम्प जाँदा कून ठाँउमा केन्द्रविन्दू र कति रेक्टर गयो भनेर तत्कालै आकस्मिक अलर्टबाट सबैजनालाई थाहा हुन्छ ।
४. नेपालमा भूकम्प जाँदा यातायातका सवारी साधनमा सवार प्राय सवैलाई थाह हुंदैन् । त्यसैको कारण ठूल्ठूला भयानक दुर्घटनाहरू हूने गर्छन् । जापानमा भने भूकम्प जाँदा सवारी साधनमा भएको आकस्मिक अलर्ट घण्टी बज्छ र अटोमेटिक ठाँउको ठाँउमै रोकिन्छन् ।
त्यस कारण पनि दुर्घटनाहरू कमै मात्रमा हुन्छ ।
५. नेपालमा भूकम्पले मान्छेलाई घाइते बनाउने तथा मार्ने काम गर्दछ । जापानमा भने भूकम्पले हैन, मान्छेले बनाएको भौतिक संरचना र बिवेकले हामीलाई मार्ने गर्छ ।
६. नेपालमा बिशेष परिस्थिति बाहेक सामान्यतया बर्षमा एक दुई पटक पनि भूकम्प आउंदैन । तर जापानमा दिनमै दुई तीनपटक भूईचालो जान्छ । र पनि यहाँ कसैलाई मतलब हुन्न ।
७. नेपालमा ७.४ रेक्टरले मात्र दुई तले घर अनि धरहरा समेत ढल्छ । तर जापानमा ८.५ र ९ रेक्टरको भूकम्प जाँदा पनि धरहरा भन्दा धेरै गुणा ठूला टावर तथा घरहरू पनि ढल्दैनन् ।
८. नेपालका सडक किनारमा अर्थात सरकारी सम्पतिलाई दूरूपयोग गरी बनाएको पचासौं बर्ष पूरानो घर भत्काउन पनि सरकारी सूरक्षा फोर्स लगाएर भत्काउनू पर्छ । तर जापानमा घरको मिति पूगेपछि अर्थात सरकारले तोकिएको घरको आयू सकेपछि सरकार आँफैले भत्काईदिन्छ ।
९. भनिन्छ टाउको मात्र लुकाउने ठाँउ किन नहोस्, हामी हाम्रो घर पुगेपछि सुरक्षित महशुस गछौं । जब हामी घर पुग्छौ तब असुरक्षित महशूस गर्छौ । नेपालमा दुई तलाको नक्सा पास गरेर ६ तलाको घर बनाउछन्। तर जापान घरबाहिर तथा भित्र जहाँ पनि सूरक्षित हून्छ । सरकारले तोकिएको भन्दा १ इन्च पनि बढि बनाउन पाइन्न ।
१०. नेपालमा इज्जत देखाउन घर बनाउंछन् भने जापानमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक सुरक्षित घर बनाउछन् ।
समग्ररूपमा भन्नुपर्दा हामी आँफैप्रति सूरक्षित छौं भनि विश्वस्त हुनुपर्छ । जापानीहरु आफैंमा धेरै विश्वास गर्छन्, मैले कामको शिलशिलामा जापानी हजूरआमासँग मैले यो धाराको पानी खान मिल्छ ? भन्दै सोधे । उनले मेरो हात समातेर बाथरूमतर्फ लगिन । त्यहाँ हात धून प्रयोग गर्ने पानी खाँदै भनिन्-'यो जापान हो, तिमीलाई तिर्खा लागेको भए बाथरूमको पानी खाँदा पनि केही हुन्न । यहाँ हरेक ठाँउको पानी सफा हुन्छ ।' प्राकृतिक प्रकोप जुनसुकै ठाँउमा जुनसुकै बेला जान सक्छ । भूकम्पले हामीलाई कहिल्यै पनि मार्दैन, हामीले बनाएको संरचनाले हामीलाई मार्ने अर्थात मृत्युको मूखमा पूर्याउने काम गर्छ । त्यसैले प्रकोपबाट बच्ने संरचनाको निर्माण गरौं । मेरो देश ध्वस्त भएको छैन्-यो नयाँ संरचनाको निर्माण थालनीबाट भएको प्रलय हो । अब बन्नेछ नयाँ नेपाल-सूरक्षित उपायहरू अपनाऔं, भूकम्पबाट हूने क्षतिलाई कम गरौँ । हाम्रो भत्किएका संरचनाहरू पुनःनिर्माण गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरौँ ।